ပီရူးနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 10°S 76°W﻿ / ﻿10°S 76°W﻿ / -10; -76
Co-official names[မှတ်စု ၁]
"Firme y feliz por la unión" (စပိန်)
"Himno Nacional del Perú" (စပိန်)
"Marcha de Banderas" (စပိန်)
Gran Sello del Estado (စပိန်)
လူမျိုးစု (၂၀၁၇[မှတ်စု ၂])
၆၀.၂၀% မက်စတီဇို (လူဖြူနှင့် ဒေသခံတို့ အရော)
၀.၁၆% Nikkei (ဂျပန်) သို့မဟုတ် Tusán (တရုတ်)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
၁၈၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်
၁၈၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်
၁၈၇၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်
၁,၂၈၅,၂၁၆ km2 (၄၉၆,၂၂၅ sq mi) (အဆင့်: ၁၉)
၃၄,၂၉၄,၂၃၁ (အဆင့် - ၄၄)
• ၂၀၁၇ သန်းခေါင်စာရင်း
၂၃/km2 (၅၉.၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၉၈)
$၃၈၅.၇၁၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၄၇)
$၁၁,၅၁၆ (အဆင့် - ၁၀၃)
$၁၉၅.၇၆၁ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၄၉)
$၅,၈၄၅ (အဆင့် - ၈၆)
မြင့် · ၇၉
Quechua, Aymara and other indigenous languages are co-official in the areas where they are predominant.
ပီရူးနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ပီရူးသမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိကတိုက်၏ အနောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် အီကွေဒေါနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ချီလီနိုင်ငံနှင့် အနောက်ဘက်တွင် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့ ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။
ပီရူးသည် တစ်ခါက အင်က အင်ပါယာ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ လတွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အော်လန်တာဟူမာလာကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခဲ့ကြသည်။ ပီရူးသည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုရှိလာသော်လည်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု မပပျောက်သေးပေ။
ပီရူးနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး မြောက်ချီကို ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အင်ကာ အင်ပါယာ တည်ရှိရာ ဒေသဖြစ်သည်။ ၁၆ ရာစုနှစ်တွင် စပိန် အင်ပါယာ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ၊ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းများ၊ စီးပွားရေး ကမောက်ကမ စသည့် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ In Peru, other languages have been officially recognized as legitimate autochthonous languages. In each of these, Peru's official name (စပိန်: República del Perú, pronounced: [reˈpuβlika ðel peˈɾu]) is as follows:
↑ The 2017 National Census included, for the first time,aquestion of ethnic self-identification that was addressed to people aged 12 and over considering elements such as their ancestry, their customs and their family origin to visualize and better understand the cultural reality of the country.
↑ Shugart, Matthew Søberg (September 2005). "Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns". Graduate School of International Relations and Pacific Studies. Archived 19 August 2008 at the Wayback Machine.
↑ Shugart, Matthew Søberg (December 2005). "Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns". French Politics3(3): 323–351. doi:10.1057/palgrave.fp.8200087. ISSN 1476-3427. OCLC 6895745903. “Only in Latin America have all new democracies retainedapure presidential form, except for Peru (president-parliamentary) and Bolivia (assembly-independent).”
↑ Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Total, por Años Calendario y Edades Simples, 1950–2050 (in es)။ National Institute of Statistics and Informatics (September 2009)။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Peru။ တမ်းပလိတ်:အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ United Nations Development Programme။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 15 December 2020 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ 16 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပီရူးနိုင်ငံ&oldid=725824" မှ ရယူရန်
Quechuaဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Aymaraဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
စပိန်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။